Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Weerarada N/hurayaasha CWXO ay ku Qaadeen Ciidamada Wayaanaha
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Weerarada N/hurayaasha CWXO ay ku Qaadeen Ciidamada Wayaanaha
Posted by ONA Admin	/ April 2, 2015
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay wadanka Xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya inay jiraan dagaallo badan oo ay CWXO ku qaadeen ayaamihii ugu danbeeyay ciidanka Wayaanaha halkaasoo lagaga laayay askar daraajooyin kala duwan lahaa oo inta la huibsaday gadhaya 31 askari, halka dhaawaca badan ay goobaha kala tageen. Dagaaladaa oo qaarkood aan weli lasoo faahfaahinin ayaa u dhacay sidan;
22/3/15 Fardhiita oo tuulada Gabagabo ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
25/3/15 Farmadow oo Gobolka Qoraxay katirsan dagaal aad u culus oo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga loogu gaystay khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
25/3/15 Qudhacboorame oo tuulada Gabagabo ee gobolka Qoraxay katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
29/3/15 Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa wayaanaha ku dhexmaray waxaa ciidanka wakhtigiisii dhamaaday ee gumaysigu soo uruuriyay lagaga dilay 10 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/3/15 Malayko oo dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/3/15 Xaraaray oo Dagmada Dhuxun ee Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/3/15 Cayuun oo Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/3/15 Yaxoob oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
31/3/15 Yaxoob oo Fiiq katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen fadhiisin ay ciidamada gumaysigu kulahaayeen halkaas ayay ku gaadhsiiyeen khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.